Barcelona vs Bayern Munich, Real Madrid v Juventus – Isku Aadka Champions League Oo La shaaciyey
HomeChampions LeagueBarcelona vs Bayern Munich, Real Madrid v Juventus – Isku Aadka Champions League Oo La shaaciyey
24/04/2015 Abdiwahab Ahmed
Barcelona ayaa afka laga geliyey kooxda awoodda badan ee Bayern Muncih isku aadka semi-finalka Champions League ee maanta lagaga dhawaaqay magaalada Nyon, kaas oo sidoo kale lagu shaaciyey in Real Madrid ay waajihi doonto Juventus.
Kooxda Barcelona ee uu wato tababare Luis Enrique oo guul aanay ku rafaadin kaga soo gudubtay Paris Saint-Germain wareeggii siddeed dhamaadka ee Champions League ayaa tigidhka u goosatay Salaasadii in ay iska xaadiriso Semi Finalka hase yeeshee Bayern Munich oo uu gadh-wadeen ka yahay Pep Guardiola oo ah macallinkii hore ee Barcelona ayaa gadhka ay isla galeen.
Kulankii isugu dambeeyey ee ay labadan kooxood yeesheen waxa uu ahaa Semi-finalkii Champions League ee sannadkii 2012-2013 markaas oo ay Bayern Munich ku badiso 7-0 celcelis ahaan labadii ciyaaroodba, waxaanay markii dambe ku guuleysatay koobka. Dhinaca Barca, sannadkii 2008-09 ayay si xun ugu garaacday Bayern Munich quarter finalka Champions League, markaas oo ay celcelis ahaan ku badisay 5-1.
Geesta kale, kooxda koobka haysata ee Real Madrid ayay ciddiyaha ku dagaallami doonaan Juventus, iyadoo ay labada kooxood isugu dambaysay sannadkii 2013-13 oo ay marxaladda koowaad ee hormooyinka (Group) isku haleeleen labada kooxood, waxaanay lugtii hore ku dhamaatay 2-1 ay Madrid oo gurigeeda joogtaa ku badisay halka kulankii dambena ay ku kala baxeen 2-2. Juve iyo Madrid waxa ay marxaladdan semi-finalka ah oo kale ku kumeen sannadkii 2002-03, markaas oo hawada loo diray Real Madrid.
Madrid iyo Juve sannadkii 1997-98 ayay isugu soo hadheen ciyaarta finalka ee Champions League, waxaana koobka kor u qaadday oo guushu raacday Real Madrid.
Lugta koowaad ee Champions League waxa la ciyaari doonaa 5/6 May, is-aragga labaadna waxa uu dhici doonaa 12/13 May.
Ciyaarta u dambaysa ee Finalka ayay labada kooxood ee isugu soo hadhaa waxay ku ciyaari doonaan June 6, garoonka Olympiastadion ee magaalada Berlin ee Germany.